MITOLOTRA El Calafate SIMARG FSX & P3D
Toerana manodidina avy ao amin'ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena miorina ao El Calafate ao Arzantina, dia manana fotoana roa, fahavaratra na ririnina (miaraka amin'ny oram-panala) fa ho azo atao ny mifidy mandritra ny fametrahana mandeha ho azy. Ahitana ny toerana manodidina ny trano lehibe sy ny sary-tena textures.
Comandante Armando Tola International Airport (Spanish: Aeropuerto International de El Calafate - Comandante Armando Tola) (Iată: FTE, ICAO: SAWC) dia seranam-piaramanidina ao Santa Cruz Province, Arzantina. Izany no misy eo ho eo 21 km (13 km) atsinanan'ny tanànan'i El Calafate. Ny seranam-piaramanidina no niaraka niasa ny governemanta sy ny London Supply. Amin'izao fotoana izao, ny seranam-piaramanidina ihany no nanompo ny Aerolíneas Argentinas, LAN Arzantina, ary mampitondra. Izany no andrefana Arzantina seranam-piaramanidina nanompo ny voalahatra sidina.
Ny seranam-piaramanidina Natokana tamin'ny Novambra 2000, fanoloana taloha Argentino Lago Airport (Ing / SAWL). Izany izao ny tena fidirana ho any Los Glaciares National Park. Ny seranam-piaramanidina ny endrika noforonina ny Carlos Ott, mpanao mari-trano malaza avy any Uruguay. Ao 2010, ny seranam-piaramanidina nampiasain'ny mahery 500,000 mpandeha.
El Calafate dia tanàna ao amin'ny faritanin'i Santa Cruz, Arzantina, ary ny lohan'ny amin'ny departementan'i la Lago Argentino. Izany dia miorina ao Arzantina Patagonia, akaikin'ny atsimo amoron'ny farihin'i Argentino sy 256 km avaratrandrefan'i Rio Gallegos. Ny mponina dia 6,143 mponina tao 2001. (Loharano: Wikipedia)
Auto-installnavaozina tamin'ny v11
Downloads 8 181
SIMARG - Simulacion Arzantina